Lioka 9:43b-50 "Fa raha talanjona izy rehetra tamin’izay rehetra nataon’i Jesosy, dia hoy Izy tamin’ny mpianany: 44 Ampidironareo ao amin’ny sofinareo izany teny izany; fa ny Zanak’olona efa hatolotra eo an-tànan’ny olona. 45 Nefa tsy azon’ny mpianatra io teny io sady nafenina azy izany mba tsy ho fantany; ary natahotra hanontany Azy ny amin’io teny io izy. 46 Dia nisy fisainana niseho tao am-pony ny amin’izay ho lehibe ao aminy. 47 Ary Jesosy nahalala ny fisainan’ny fony, dia nandray zaza anankiray ka nametraka azy teo anoloany; 48 ary hoy Izy tamin’ireo: Na zovy na zovy no mandray io zaza io noho ny anarako dia mandray Ahy; ary na zovy na zovy no mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy; fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra, dia izy no lehibe. 49 Ary Jaona namaly ka nanao hoe: Tompoko, izahay nahita anankiray namoaka demonia tamin’ny anaranao, ka noraranay izy, satria tsy manaraka antsika. 50 Fa hoy Jesosy taminy: Aza raràna, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo."
Fa maninona loatra no dia mahafatifaty ny olona toa izao ny fitiavana ho ambony sy lehibe? Mijery ny Hazo Fijaliana (43b-44). Tsy tian’ny Tompo ho talanjona sy ho maimay ny amin’ny fanasitranana mahagaga nataony fotsiny ny mpianatra sy ny vahoaka. Tiany ho fantatr’izy ireo ny hevitry ny asa izay ataony: dia ny fitiavan’Andriamanitra izay manome sy mahafoy ny tenany mihitsy hatramin’ny fahafatesana aza, mba hamonjena ny olona (Romana 5:8). Rehefa misy asa mahagaga ataon’Andriamanitra, aiza no asaintsika mitodika ny mason’ny mpanatrika? Aoka ho ny Hazo Fijaliana hatrany no aseho azy ireo! Ny fahefana, amin’ny fomba fijerin’izao tontolo izao (45-48). Tsy mbola takatry ny mpianatra ny zava-miafin’ny Hazo Fijaliana. Mbola ny eto an-tany no nibahana tao an-tsain’izy ireo. Tsy mahagaga raha izay handimby ny Mpampianatra no nampiady hevitra azy. Io fitadiavan-tseza io no manimba ny fifandraisana na eo amin’ny mpinamana, na eo amin’ny fiaraha-monina, fitadiavana fahefana hanjakazakana. Narodan’i Jesosy izany ary nambarany fa ny fanetren-tena no tena maneho ny fahefana (48b; Ohabolana 15:33). Firaisana ao anatin’ny fahasamihafàna (49-50). Fa maninona no fahita matetika ny fifandonana, fifaninanana, fifampitsaràna, eo amin’ny kristiana, indrindra avy amin’ny antokom-pinoana samihafa? Tsy izany moa no hitantsika eo amin’ny mpianatra eto? Hoy Jesosy: “... fa izay tsy manohitra anareo, dia momba anareo.” (50). Na dia samihafa aza ny mpino, samihafa ny kolon-tsaina sy ny fomba fijery, ny fandraisana an’i Kristy no maha-iray antsika (Jaona 1.12), ho tenan’i Kristy (1 Korintiana 12:13). Ndeha hotandrovina izany maha-iray ny tenan’i Kristy izany!
Hosaintsainina: Romana 12:3-8 "Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin’ny olona rehetra izay eo aminareo: Aza miavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony hoheverina; fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain’Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin’i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomena antsika: raha faminaniana, dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana; raha fanompoana amin’ny fiangonana, dia aoka ho amin’ny fanompoana; raha mampianatra, dia aoka ho amin’ny fampianarana; raha mananatra, dia aoka ho amin’ny fananarana; izay manome, dia aoka ho amin’ny fahatsoram-po; izay manapaka, dia aoka ho amin’ny fahazotoana; izay mamindra fo, dia aoka ho amin’ny fifaliana."
Soratra masina ho an’ny herinandro: Salamo 41:1 "Ho an’ny mpiventy hira. Salamo nataon’i Davida. Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo; Jehovah hamonjy azy amin’ny andro fahoriana."